Kutengesa uye Kushambadzira: Mutambo Wepakutanga Wechigaro | Martech Zone
Ichi chikuru infographic kubva kuchikwata chePardot kumasangano anotengesa uye kushambadzira kunetseka kuzvienzanisa. Sezvo a mutengesi wekutengesa, isu takatambura nemasangano anotengesa-kutengesa zvakare. Imwe nyaya yakakosha ndeyekuti masangano anotungamirirwa nekutengesa anowanzo shandisa izvo zvakafanana zvavanotarisira kuboka ravo rekutengesa kuchikwata chekushambadzira.
Isu tinopihwa basa nemasangano anotyairwa nekutengesa nekuti ivo vanoona kuti yavo mhando haina kuvaka ruzivo, masimba uye kuvimba pamhepo uye kuti yavo yekutengesa timu iri kuputswa nevanokwikwidza vanoita. Asi ipapo kana kudyara kwaitwa mukuvaka iko kuziva, chiremera, uye kuvimba - mutungamiri wekutengesa anotanga kudzingirira padiki pane mhando yekutungamira, huwandu hwehutungamiriri, kumhanya kwekuvhara, uye kukosha kwekuita. Iko kushamisika kusatarisira kunyorera munguva pfupi. Tinoda kuyera kukurumidza kana zvasvika pakushambadzira.
Tinoda kuona, nehurongwa hukuru hwekutengesa, kuti isu tinoramba tichiwedzera ruzivo, kuvaka chiremera, uye kuwana kuvimba. Kuburikidza nekutaurirana nesangano rekutengesa, tinoda kuona kuti tiri kugadzira zvimedu zvechingwa zvakanaka zvinozobatsira munhu anotengesa kuvhara kutengeswa. Nekufamba kwenguva, isu tinoda kutarisa mhando yekutungamira ichivandudza, tungamira kuwanda kuwanda, mutengo pamutobvu wakatsetseka, wedzera kumhanya kwekuvhara uye kukosha kwekuita. Tinofanira kunge tichiona izvi kwenguva yakareba… mwedzi nemakore, kwete ipapo ipapo.
Nezvinangwa zvakasiyana, zvinokurudzira, uye maturusi, kuenzanisa kambani yako yekutengesa uye yekushambadzira madhipatimendi kunogona kunge kuri kunetsa kwezuva nezuva. Neboka rega rega richisimudzira zvirevo zvavo kunzvimbo dzakasiyana dzebhizimusi maitiro, zvinogona kuve zvakaoma kuwana chero chinhu chinowirirana chingavaunza pamwechete. Nekudaro, kana kutengesa uye kushambadzira kuchishanda pamwechete kugadzira hutungamiri, kusimudzira hukama, uye madhiri epedyo, kambani inogona kubudirira. Matt Wesson, Pardot.
Kupa kunowedzera. Ini handitende kuti chero kutengesa kunofanirwa kuve kuchinzi kune chero kana. Munhu wako wekutengesa anofanira kukwanisa kuenda kumberi uye nekutenda timu yekushambadzira nekuzivisa uye kutyaira iyo inotungamira kusvika padyo. Chikwata chako chekushambadzira chinofanira kukwanisa kupa ongororo yakazara pamusoro pekuti kuedza kwavo kuri kubatsira sei mumiriri wekutengesa. Ndosaka ndichikoshesa mhedziso yeiyi infographic - kunongedzera sei Kushambadzira otomatiki - ne tungamira kutungamira / kurovera, kutungamirira kutarisira uye kubika inobatsira timu yekutengesa uye kutungamira timu yekushambadzira kunatsiridza nzira dzese dzekuwana.
Chikamu chinyorwa: SeMurwi weKushambadzira, ini ndaizoisa yangu CMS nemapeji ekumhara uye kufona-kune-chiito nzira pamberi pe Twitter uye kunyangwe Adwords. Zvemukati (zvine chiratidzo chakamisikidzwa) chinofanirwa kuve hwaro hweyese nzira yekutengesa inopinda.
Tags: mutambo kuti zvigarolead gradingkutungamirira kutarisiratungamira kuzivisalead alamakukurudzira kukurudzirazvishandiso zvekushambadziraruregererodambudziko nekutengesadambudziko nekutengesakutengesa uye kushambadzirakutengesa kukurudzirazvishandiso zvekutengesakutengesa maringe nekutengesa
Iyo Periodic Tafura YeMukati Kushambadzira